तपाईँ कसरी सधैँभरि बाँच्न सक्नुहुन्छ? (१ युहन्‍ना २:१७)
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काम्बा किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्षोसा गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (युनानिज) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (क्युआटोनी) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पारसी पेन्सिल्भेनिया जर्मन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाओले बाटाक (टोबा) बिस्लामा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सुन्डा सेत्स्वाना सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिब्रू हिलिगेनोन
के तपाईँ सधैँभरि बाँच्न सक्नुहुन्छ?
बाइबल भन्छ: “जसले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्छ, ऊ सधैँभरि रहिरहन्छ” (१ युहन्‍ना २:१७) परमेश्‍वर हामीले के गरेको चाहनुहुन्छ?
परमेश्‍वर र उहाँको छोरा येसुबारे सिक्नुहोस्‌। येसुले परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गर्नु हुँदा यसो भन्‍नुभयो: “अनन्त जीवन पाउन तिनीहरूले तपाईँ एक मात्र साँचो परमेश्‍वरलाई अनि तपाईँले पठाउनुभएको येसु ख्रिष्टलाई चिन्‍नुपर्छ।” (युहन्‍ना १७:३) हामी कसरी परमेश्‍वर र येसुलाई चिन्‍न सक्छौँ? बाइबल पढेर अनि पढेको कुरालाई जीवनमा उतारेर हामी उहाँहरूलाई चिन्‍न सक्छौँ। * हामीलाई जीवन दिनुहुने सृष्टिकर्ता यहोवाको सोचाइ बुझ्न बाइबलले हामीलाई मदत गर्छ। (प्रेषित १७:२४, २५) बाइबलमा येसुबारे पनि थुप्रै कुरा लेखिएको छ।उहाँले “अनन्त जीवनका वचनहरू” बारे सिकाउनुभयो।
येसुले दिनुभएको फिरौतीको बलिदानमा विश्‍वास गर्नुहोस्‌। येसु “सेवा गर्न र धेरैको निम्ति फिरौतीस्वरूप आफ्नो ज्यान दिन” पृथ्वीमा आउनुभयो। (मत्ति २०:२८) येसुको फिरौतीको बलिदानले गर्दा मात्र सुन्दर पृथ्वीमा सधैँभरि बाँच्ने आशाको ढोका मानिसहरूको निम्ति खुल्ला भयो। * (भजन ३७:२९) येसुले भन्‍नुभयो: “किनकि परमेश्‍वरले संसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो ताकि ऊमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्‌ तर उसले अनन्त जीवन पाओस्‌।” (युहन्‍ना ३:१६) येसुलाई मुखले मात्र विश्‍वास गर्छु भनेर पुग्दैन। हामीले येसुको शिक्षाअनुसार जीवन बिताएर र उहाँको बुबाको इच्छाअनुसार चलेर येसुमा विश्‍वास गरेको देखाउनुपर्छ।—मत्ति ७:२१; याकुब २:१७.
परमेश्‍वरसँग अझै घनिष्ठ हुनुहोस्‌। परमेश्‍वर हामी उहाँको नजिक आएको र उहाँको मित्र भएको चाहनुहन्छ। (याकुब २:२३; ४:८) परमेश्‍वरको न सुरुवात छ न अन्त। उहाँ अमर हुनुहुन्छ अनि उहाँ आफ्नो मित्र पनि सधैँभरि बाँचेको चाहनुहुन्छ। उहाँको खोजी गर्ने सबैले ‘सधैँभरि जीवनको आनन्द उठाएको’ उहाँ चाहनुहुन्छ।—भजन २२:२६.
सधैँभरि बाँच्ने जीवनबारे मानिसले राख्ने गलत धारणा
गलत धारणा: मानिसले प्रयास गरे भने सधैँभरि बाँच्न सकिन्छ।
सत्य: चिकित्सा विज्ञानमा भएको प्रगतिले मानिसको आयु बढाउन सकेको छ तर सधैँभरि बाँच्ने जीवन भने दिन सकेको छैन। परमेश्‍वरले मात्र हामीलाई सधैँभरि बाँच्ने दिन सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ हाम्रो “जीवनको मूल” हुनुहुन्छ। (भजन ३६:९) उहाँले “मृत्युलाई सधैँको निम्ति निल्नुहुनेछ” र उहाँप्रति वफादार रहनेहरूलाई सधैँभरि बाँच्ने जीवन दिनुहुनेछ भनी बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको छ।—यसैया २५:८; १ युहन्‍ना २:२५.
गलत धारणा: एउटा जातिले मात्र सधैँभरि बाँच्ने जीवन पाउनेछ।
सत्य: परमेश्‍वर पक्षपाती हुनुहुन्‍न “बरु जुनसुकै जातिको भए तापनि जसले उहाँको डर मान्छ र सही काम गर्छ, उसलाई उहाँ स्विकार्नुहुन्छ।” (प्रेषित १०:३४, ३५) परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्ने सबै जाति र पृष्ठभूमिको मानिसले सधैँभरि बाँच्ने जीवन पाउन सक्छन्‌।
गलत धारणा: सधैँभरि बाँच्ने जीवन पट्ट्याइलाग्दो हुनेछ।
सत्य: सधैँभरि बाँच्ने जीवन दिने प्रतिज्ञा परमेश्‍वरले गर्नुभएको हो। उहाँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र हामी आनन्दित भएको चाहनुहुन्छ। (याकुब १:१७; १ युहन्‍ना ४:८) अर्थपूर्ण काम गऱ्‍यौँ भने हामी आनन्दित हुन सक्छौँ भनेर उहाँलाई थाह छ। (उपदेशक ३:१२) सधैँभरि यस पृथ्वीमा बाँच्ने मानिसले अर्थपूर्ण र सन्तोषजनक काम पाउनेछन्‌ र यसले उनीहरूलाई र उनीहरूको प्रियजनलाई फाइदा पुऱ्‍याउनेछ भनेर परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।—यसैया ६५:२२, २३.
अर्को कुरा, पृथ्वीमा सधैँभरि बाँच्ने मानिसले सृष्टिकर्ता र उहाँको अद्‌भुत सृष्टिबारे सधैँ नयाँ कुरा सिकिरहने मौका पाउनेछ। “मानिसले साँचो परमेश्‍वरको काम पूर्ण रूपमा कहिल्यै बुझ्न नसके” तापनि उहाँले मानिसलाई उहाँबारे सिक्न सक्ने गरी र सधैँभरि बाँच्ने इच्छासहित सृष्टि गर्नुभयो। (उपदेशक ३:१०, ११) त्यसैले पृथ्वीमा सधैँभरि बाँच्ने मानिसले सधैँ नयाँ कुरा सिक्न र गर्न पाउनेछ।
^ अनु.2यहोवाका साक्षीहरू निश्‍शुल्क बाइबल अध्ययन गराउँछन्‌। थप जानकारीको लागि बाइबल अध्ययन कसरी गरिन्छ? भन्‍ने भिडियो हेर्नुहोस्‌।
^ अनु.3“येशूले कसरी मानिसहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ?” भन्‍ने लेख हेर्नुहोस्‌
जीवन र मृत्यु बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास बढाउने परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास
येसुले हाम्रो निम्ति बिन्ती गर्नु किन जरुरी छ? के उद्धार पाउन येसुमा विश्‍वास गरे पुग्छ?
परमेश्‍वरको इच्छा के हो?
आफ्नो इच्छा पृथ्वीभरिका सबै मानिसले थाह पाएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ। त्यो इच्छा के हो अनि आज कसले यसबारे सिकाइरहेका छन्‌?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने के तपाईँ सधैँभरि बाँच्न सक्नुहुन्छ?
तपाईँ कसरी सधैँभरि बाँच्न सक्नुहुन्छ?
ijwbq लेख १४७
तपाईँ सधैँभरि पृथ्वीमा बाँच्न सक्नुहुन्छ